Redmi 7A: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabida rasmiga ah | Androidsis
Redmi 7A ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Saacadihii la soo dhaafay waxaa jiray dhowr xatooyo, qaar ka mid ah waxaa xaqiijiyay Xiaomi, laakiin ugu dambeyn xilligan ayaa yimid. Redmi 7A horeyba si rasmi ah ayaa loo soo bandhigay. Waa taleefanka cusub ee sumadda, oo imanaya dhowr maalmood ka dib markii shirkaddu soo bandhigtay lambarkaaga Redmi Note 7S gudaha Hindiya. Maxaan ka filan karnaa taleefankan cusub?
Waxaan wajaheynaa nooc gaara qeybta hoose ee bartamaha. Waxaa loo soo bandhigay ikhtiyaar wanaagsan qaybtaan, qiimo wanaagsan oo lacag ah. Marka waxaan rajeyneynaa in Redmi 7A uu sifiican u iibin doono markuu yimaado dukaamada.
Sumaddu waxay ku haysaa waxyaabo badan taleefankan in aan ku aragnay jiilkii hore. In kasta oo iyaguna ay nooga tegayaan horumarin taxane ah oo ku jirta. Dhammaantood waxaa loogu talagalay inay ku siiyaan waxqabad wanaagsan taleefanka, sida kororka awoodda batteriga ee qalabka, tusaale ahaan.
Redmi K20 horeyba waxay u laheyd taariikhda soo bandhigida
1 Tilmaamaha Redmi 7A
Tilmaamaha Redmi 7A
Heerka naqshadeynta, tan 'Redmi 7A' sidoo kale wax badan iskama beddelin, marka la barbardhigo jiilalkii hore ee taleefannadan kala duwan. Astaantu waxay dooratay qaab naqshad caadi ah oo taleefanka ah. Waxay nooga tegayaan shaashadda sare iyo hoose ee shaashadda. Markaa ma jiro raad raad-ururin ama nooc kale oo walxo ah oo ku jira dareenkan. Kuwani waa faahfaahinta taleefanka:
Muuqaal: 5,45-inch LCD / IPS leh HD + xallinta (1440 x 720 pixels)
Kaydinta gudaha: 16/32 GB
Kaamirada gadaal: 13 MP
Kaamirada hore: 5 MP
Nidaamka qalliinka: Android Pie 9.0 oo leh MIUI 10
Batariga: 4.000 Mah oo leh 10W lacag
Isku xirnaanta: WiFi 802.11 a / c, Bluetooth 4.2, microUSD, 4G Volte, GPS, laba SIM
Kuwa kale: Aqoonsiga wajiga, 3,5mm Jack, Wireless FM Radio, Splash Resistant
Cabirrada: 146,30 x 70,41 x 9,55mm
Miisaan: 150 garaam
Naqshadayntu waa mid guud oo ka mid ah safafka ugu fudud ee ku jira Android. In kasta oo bilahaan aan awoodnay inaan aragno sumado badan oo taleefanno ah oo doorbiday inay u adeegsadaan qaddarka meelaha hoose ama dhexdhexaad ah. Laakiin tan 'Redmi 7A' waxaan weli ka helnaa qaab naqshad caadi ah leh, oo leh saamiga shaashadda 18: 9. In kasta oo looxyada sare iyo kuwa hoose ay aad ugu muuqdaan taleefanka. Shaashaddu kuma darto isbeddellada shaashadaha waaweyn, oo ka weyn 6 inji, sidoo kale. Xaaladdan oo kale way gaabaneysaa, oo cabbirkeedu yahay 5,45 inji.
Batarigu waa mid ka mid ah qodobbada adag ee ku jira Redmi 7A. Waxay u kordhay si la yaab leh, sharad ku saabsan kiiskan oo ku saabsan awoodda 4.000 Mah. Maxaa shaki la'aan ballan qaadaya ismaamul wanaagsan oo loogu talagalay taleefanka nooca Shiinaha. Telefoonku sidoo kale wuxuu nooga tagayaa hal kamarad dhinac kasta oo dhinac ah. Sida caadada u ah safafkan, ma lihin dareeraha sawirka faraha. Taa baddalkeeda, shirkaddu waxay dooratay dareemayaal aqoonsi wajiga ah, oo ku yaal kamaradda hore ee taleefanka. Mid kale oo ka mid ah awooda aaladda ayaa ah iska caabbinta wax firidhsan. Hawl la hubo in lagu qiimeeyo si togan.
Kuwa xiiseynaya inay iibsadaan Redmi 7A lo waxaa laga heli karaa laba midab oo kala duwan, taas oo aan ku arki karno sawirka. Waxaa lagu sii daayaa buluug iyo madow. Sidoo kale, waxaan haynaa laba nooc oo taleefanka ah oo ku saabsan RAM iyo kaydinta. Mid leh 2/16 GB midna 3/32 GB, si aad awood ugu yeelato inaad doorato midka ku habboon kiis kasta. Labada noocba waa lagu ballaadhin karaa microSD.
Waqtigan xaadirka ah wax macluumaad ah kama hayno qiimaha Redmi 7A. Nasiib wanaag, maahan inaan sugno waqti dheer ilaa aan ka ogaanno. Waxaa laxaqiijiyay in 28-ka May, soo bandhigida Redmi K20, aan si rasmi ah uheli doono xogtaan. Sida la filayo, waxay sidoo kale ahaan doontaa dhacdadan markii laga wada hadli doono goorta taleefankan la furayo suuqa. Tan iyo xilligan ma hayno wax macluumaad ah oo arrintan la xiriira sidoo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Redmi 7A ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Fold Galaxy weli diyaar uma ahan in la bilaabo
Vivo Z5x: Taleefankii ugu horreeyay ee summaddu leedahay oo leh dalool shaashadda